‘एमसीसी पास गरिँदैन भने नेपाल अफगानिस्तान बन्छ – बाबुराम भट्टराई - News 88 Post
October 11, 2021 N88LeaveaComment on ‘एमसीसी पास गरिँदैन भने नेपाल अफगानिस्तान बन्छ – बाबुराम भट्टराई
यसकारण नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नका लागि भए पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
डा. भट्टराईले जसपा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग दुश्मनी पनि नगर्ने, नझुक्ने पनि धारणा राखे ।
याे पनि समाचार, सर्वेसर्वा बन्दै ओली, अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने ल्याकत कसैले राखेन
नेकपा एमालेले नेतृत्व हेरफेरका लागि आगामी मंसिरमा दशौं महाधिवेशनमा गर्दैछ । ओलीले विधान महाधिवेशनबाटै आफूलाई निर्विकल्प अध्यक्षका रुपमा उभ्याइसकेका छन् । पार्टी अध्यक्षमा कुनै नेताले दाबी प्रस्तुत गर्न नसके पनिअन्य पदाधिकारी पदका लागि भने आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न एमाले नेताहरुबीच दौडधुप सुरु भएको छ ।
नेकपा एमालमा पहिलोपटक अभ्यास गरिएको विधान महाधिवेशनको व्यवस्था अनुसार ७० बर्षे उमेरहद कायम गरिए पनि ७० वर्ष पुरा नहुँदै उम्मेदवार भएर निर्वाचित व्यक्तिले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष फाइदा अध्यक्ष केपी ओलीलाई भएको छ । अर्थात ओलीले विधान महाधिवेशनबाटै आफूलाई निर्विकल्प अध्यक्षका रुपमा उभ्याइसकेका छन । एमालेको विभाजनले ओलीलाई विना कुनै कसरत निर्विकल्प नेतृत्व बन्न प्रत्यक्ष सहयोग पुग्यो ।
एमाले नेताहरुले ओलीलाई नै पुन पार्टी सुम्पिने निश्चित छ । आफ्नो पदको टुङगो नभए पनि महासचिव ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमाओली नै दोहोरिने स्पष्ट पारे । यस अघि अध्यक्षको दावेदारी गरीरहेका पोखरेलले आफ्नो अध्यक्ष बन्ने इच्छा ओलीसँग आत्मसमर्पण गरे ।
एमालेमा कायम उमेर हदवन्दीले दोस्रो तहका नेताहरु प्रत्यक्ष संकटमा परेका छन् । तर सबै ओलीकै जयजयकार गरिरहेका छन् । ओलीको देवत्वकरण गर्ने नेताहरु अहिले अध्यक्ष बाहेक अन्य बाँकी रहेका अन्य १४ पदाधिकारीमा भने दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
उमेर हदकै कारण आगामी महाधिवेशनपछि तेस्रो पुस्ताका विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, घनश्याम भूसाल,योगेश भट्टराई र प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेता हाबी हुने छन् ।
अहिले ओलीलाई देवता मान्नेहरुको ठुलो झुण्ड मात्र एमालेमा वाँकी रहेकोले महाधिवेसन सहजपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्ने देखिन्छ । एमालेभित्र वैचारिक छलफल भन्दा पनि ओलीको देवत्वकरण नै हावी हुने हुँदा अन्य विकल्प नभएको कतिपयको तर्क छ ।
एमालेको महाधिवेशनको रिहर्सल विधान महाधिवेशनबाट पनि आँकलन गर्न सकिन्छ ।नेतृत्व हेरफेरका लागि महाधिवेसन भए पनि ओलीले अन्य पदमा पनि हस्तक्षेप गर्दै ‘एसम्यान’ लाई पदमा पुर्याउन सक्छन् ।
त्यसकारण एमालेभित्रको राजनीतिक परिवेशले एमालेको महाधिवेशन औपचारिकताका लागि मात्र हुने निश्चित छ । साथै महाधिवेशनपछि एमालेभित्र ओलीवाद अझ विस्तार हुने पक्का छ ।
स्पेस खाेज्दै रनभुल्ल बामदेवद्वारा नेकपा एमालेको उपाध्याक्षबाट राजीनामा, नयाँ पार्टीमा प्रवेश !
August 19, 2021 N88
August 6, 2021 August 8, 2021 N88